सम्पादकीय : जनताको मतलाई किन हेला ? – Saurahaonline.com
सम्पादकीय : जनताको मतलाई किन हेला ?
नेपालमा पछिल्लो समयमा जनताले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि चाहेका छन् ।
जनाताले मुलुकमा अब आर्थिक क्रान्तिका लागि जोड दिन नतोहरुलाई विशेष आग्रह अनुधरोसगैँ स्पष्ट मत समेत दिएका छन् ।
जसका कारण गएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन वाम गठबन्धनलाई अत्याधिक मत दिए । तर कारण वाम गठबन्धन मात्र नभई अब धेरै पार्टी होईन् सबै पार्टी आ–आफ्नो विचार मिल्नेसगँ एकजुट हुन् । र जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको एजेण्डाका केन्द्रित हुन् ।
तर वामगठबन्धनले विकास र समृद्धिसगैँ वामएकता गर्ने नारालाई मुख्य प्रथामिकता बनाई जनताको घरघरमा गए । मत मागे, जनताले मत दिए । जिताए ।
चुनाव परिमाण लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भेनर एमाले अध्यक्ष केपि ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अग्रसर थिए ।
तर चुनावको नतिजा आएको पनि दुई महिना काट्नै लागिसेकेको छ । तर एकता पनि भएको छैन्, सरकार पनि बन्न सकिरहेको छैन् । आखिर कि जनतालाईको मतलाई फेरि धोका दिने काम भईरहेको छ ?
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्राय धेरै समय चितवनमा आएका छन्, यतिवेला ।
कहिले व्यवसायीसंग कहिले बुद्धिजीवी संघ कहिले विद्यार्थीसंग त कहिले सर्वसाधारण जनता र कहिले पत्रकार संग छलफल गरि पार्टी एकताको सन्र्दभमा भएका भ्रम र नकारात्मक कुराहरुलाई चिर्दै पार्टी एकताको बाटो नजिकिदै गएको र केही दिनमै एकता हुने समभावना बलियो बनेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
एकताको बिषय जनताले अनुमोदन गरेकाले अब कहि र कसैको दवाव र प्रवावले त्यसलाई रै वरावर पनि हल्लाउन नसकने प्रचण्डको तर्क छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलिले पनि छिटो भन्दा छिटो पार्टी एकता गर्न चाहोको र त्यसमा दुवै पार्टीबाट कुनैपनि कसर बाँकी नरहने तर्क प्रचण्डको छ ।
यहि अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि लागेको बताउछन् । तर किन कुरा मात्र काम हुदैन् । जनताको प्रश्न गरिहरेका छन् । के जनताले दिएको मत यहि विषमा अलमल गर्न हो । के कारण रोकिएको छ ? एकता र सरकार गठन आम सर्वसाधरणको समेत प्रश्न छ ।
अब नेताहरु धेरै गफमा अल्झनु भन्दा पनि साना तिना बिषयलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गरि पार्टी एकता गरी देशलाई आथीृक संमृद्धिको बाटोमा अगाढी बढाउन आवस्यक छ ।
नत्र गौडो कुरेर आक्रमण गर्न पल्किएकाहरुले मौका पाउनेछन् त्यो देशर जनताका लागी घातक हुनेछ ।
जनताले फेरि राजा फालेझै वाम नफाल्लान् भनेर भन्न सकिदैन् ।
युवालाई गोली हान्ने प्रहरीमाथि गैरन्यायिक हत्याको मुद्दा चलाइने २०७८, २ बैशाख बिहीबार
अब घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट, आज प्रधानमन्त्री ओलीबाट उद्घाटन २०७८, २ बैशाख बिहीबार
रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा २०७८, २ बैशाख बिहीबार
आइपीएलमा बैंगलोरको लगातार दोस्रो जित २०७८, २ बैशाख बिहीबार
एजेन्सी । अमेरिकाको मिनसोटामा एक अश्वेत मोटर चालकलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा एकजना श्वेत प्रहरी.....
चितवनका एसपी अधिकारी ‘प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ)’ विभूषणबाट सम्मानित
चितवनसहित देशैभर २६ औँ वन्यजन्तु सप्ताह २०७८ सुरु